Gabaryahay Waligaa Ha Guursan Ninka Leh Dhaqankaan (Ka Fogoow) - Aayaha
Home ARIMAHA BULSHADA Gabaryahay Waligaa Ha Guursan Ninka Leh Dhaqankaan (Ka Fogoow)
Gabaryahay Waligaa Ha Guursan Ninka Leh Dhaqankaan (Ka Fogoow)
Guursiga ninka leh caadooyinkaan way xuntahay, kahor inta aadan guursan nin, waa inaad la qaadataa waqti si aad u ogaatid haddii uusan lahayn iyo haddii uu leeyahay caadooyinkaan hoos ku qoran.
Ninka caadada ka dhigto beenta
Way adagtahay inaad aamintid nin beenaale ah, guurka aanan lagu dhisin aaminaadana wuu bur buraa, waligaa guur haka aqbalin ninka caadada ka dhigta beenta.
Ninka intabadan ballamaha ka baxa
Ballan ka bixidda hal waala cafin karaa balse waa inaadan guursan waligaa nin si fudud ballamaha uga baxa, nacas ayuu kaa dhigaa haddii uu ballamo si fudud kuugu sameyso isla markaana uu ku burburiyo.
Ninka sida aan taxadarka lahayn wax ugu ciyaara
Nin wax ugu ciyaara si aanan ka fiirsasho lahayn ma ahan nin ay haweey guursato, waxaad ku raaxeysan kartaa dhammaan hadiyaha qaaliga ah uu kuu iibiyo balse ma rabtid lacagaha xad kabaxa ah ee uu ku ciyaaro.
Ninka aanan qaldamin ee mar walba isla saxan
Ninka mar walba islasaxan marna aanan qaldamin ma ahan nin ay haweeney guursato, qofna ma dhammeystirno waxan dhammaanteen u baahanahay inaan barano qaladaadkeena isal markaana aan diyaar u noqono isbedel, haddii uusan marnaba qaladkiisa qaadan dabadeed waa inaadan guursan.
Ninka aflagaada badan ama gacan qaadka yaqaan
Marnaba ha guursan nin ku gacan qaada haddii ay xittaa hal mar tahay maxaa yeelay mar kale ayuu kugu sameynaa ama kuu gacan qaadaa ama ku aflagaadeynaa, ha u qaadan inaad bedeli kartid ninka kuugu xad gudba jir ahaan amadareen ahaan.
Ninka damaca badan ee kaa dhiga inuu adiga ku leeyahay
Marnaba ha guursan nin kaa dhiga sida qof uu leeyahay oo kale isla markaana doonaya inaad ag joogtid 24-ka saac, dhammaanteen waan leenahay waxyaabo u baahan in dareenkeena, qallooca ama ka duwanaahasha dadka caadi ma ahan waxayna muujineysaa inuusan kugu kalsooneyn.
Alkuliistaha ama ninka maandooriyaha ku qabatimay
Guurkaaga waxay ubadantahay inuu soo gaba gaboobo isla markaana lagu furo haddii aad guursatid nin ku qabatimay maandooriyaha ama aalkolada.
Ninka aanan mudnaan ku siinin
Ha guursan ninka kusiiya mudnaan dhex dhexaad ah isla markaana aanan muujin qiimahaaga, haka aqbalin inuu si caadi ah oo mudnaan iska yar ku siiyo maxaa yeelay waad istaahishaa inaad noqotid mudnaanta saree e ninkaaga oo qiimo ayaad ku fadhisaa.
Ninka aanan dhageysan fikirkaaga
Ninka aanan dhageysan fikirkaaga kuma xushmeeyo waana inaadan marnaba guursan nin dhaqankaan leh, xiriirka qiimaha leh, seygaaga wuu xushmeynayaa fikirkaaga xittaa haddii uusan kugu raacasaneyn.
Ninka raali galinta badan
Ha guursan nin had iyo jeer la yimaada raali galin sababtoo ah raali galintaas ma imaaneyso haddii uu midnaan kusiiyo.
Previous article6 Arrimood Oo Nin Kasta Uu Jecelyahay In Gacalisadiisa Ay Yeelato
Next article5 Been oo Ragga ay u sheegaan Dumarka si ay halkaan arrin uga helaan
Haddii Ninka Uu Sameeyo Waxyaabahan Gabaryahay Xiriirka U Jar
Aayaha editor - June 16, 2019 0
Sidee ku ogaaneysaa marka ay tahay waqtigii aad xiriirkaas ama ninka aad faraha ka qaadi lahayd? Waxaa jiraan calaaamdo digniin ah sida, cabsida inuusan guur...
5 Qaab Oo Cajiib Ah Oo Ninka Aad Jeceshahay Loogu Sheegto...
3 Sabab oo uu Dhabarku kuu xanuunayo
4 Fruits you should never take when hungry
Sababaha Ugu Waaweyn Ee Keena In Lamaanuhu Isnacaan
Nin Sabab fudud Ceejo Ugu Dilay Xaaskiisa Oo Lahayd Uur Shan...
Talooyin Lamaaneyaasha Ka Caawinaya In Guurkoodu Waaro
Heesta Janno Ee Fanaanka Cabdi Hani Xaashi Oo Qoraal Ah (Ka...
3 Shaqo Oo Aabe Waliba Laga Rabo Inuu Qabto
Saddexdaan arrimood hadaad ku aragto wiil ama gabar aad guur ku...